IGeofumadas: Izibikezelo 2010: GIS Software - Geofumadas
Disemba, 2009 ArcGIS-ESRI, I-AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, -Google Earth / Amamephu, I-GvSIG, GIS ezininginingi, Microstation-Bentley, egeomates yami, qgis, uDig
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ekushiseni kwekhofi induku umamazala akwenzayo senze okunye ukusangana mayelana namathrendi asethwe ngo-2010 endaweni ye-Intanethi. Endabeni yemvelo yendawo, isimo simile kakhulu (hhayi ukusho ukuthi uyaziqhenya), okuningi kwalokhu sekushiwo kakade esikhathini esiphakathi ngamakhulu amakhulu, kodwa hhayi ukuchitha indebe yekhofi yalesi sikhathi kanye nesandulela sokuphela konyaka, lapha kuya khona.
Isoftware yezentengiso (hhayi mahhala): Zimbalwa izindaba. Ukuma phakathi kwe-ESRI, i-Bentley ne-AutoDesk kubonakala sengathi akufani, (okungenani kwimvelo yaseSpanishi) futhi ngokusho kwemisebenzi sekuyiminyaka emihlanu kusukela ubuhle be-xml nokusebenzisana nemigomo ye-OGC yeka ukumangala.
Njengoba kunqunywa ukuthi, ukuthuthukisa amakhono okuhlela i-vector ku-GIS nokukwazi ukubukeka ku-CAD yizihloko ezihamba isikhathi eside.
Ngakho, esimweni Autodesk, esizobona kakhulu yi-AutoCAD 2011, lapho abantu sebevele besetshenziselwa ithempulethi yomongo (Ribbon) futhi iqala ukubungaza ukubaluleka kwalowo mcimbi. Kungenzeka ukuthi i-Civil 3D izosinika isimanga, kepha hhayi kakhulu, ukuvuthwa kwesoftware kanye nebhalansi yokungaphazamisi abasebenzisi ngezinto eziningi ezihlanyayo kuzohlala. Futhi njengoba sazi, i-AutoDesk ayenzi izindaba ezeqisayo eminyakeni eyinqaba ebaliwe (yokukhululwa, hhayi ikhalenda), lokhu kwenziwe kuphela, lokhu kuyasiqinisekisa njengoba sizobona ifomethi entsha ye-.dwg ku-2011 lapho simemezela i-AutoCAD 2012.
Uma kwenzeka Bentley Sizobona izinto eziningi zobuqili, kodwa kuphela ezingeni lokubhema okukhulu. I-imodeli Okwamanje izothinta kuphela iProject Wise noMshicileli, nasezingeni lesiphakamiso, ngoba ngombono wami iBentley ifuna ukubuyisa inani layo elengeziwe kusuka kwaKhetha nokusabalalisa iXFM, eyihlela esikhathini esimaphakathi esingeke siyibone ngo-2010. Mhlawumbe kulo nyaka ake sibheke ukuqaliswa kokuqala kwe I-Bentley Cadastre iqhaza ku Qapheliswa, yebo, kufanele ukubhema ku-sublime, enginayo ama-hunch amathathu amancane engiwakhetha ukungabonakali.
Ngokuqondene ne-ESRI anginalo umqondo omncane walokho esingakulindela, Inguqulo ye-9.4?, Angiboni. Ngamathuluzi analelo zinga lokuma (ekuthengiseni nasekuphanga) kunzima ukuzwa ukuthi ungavuthwa ngokwengeziwe, yize abangani be indawo evulekile ube nalo odongeni luka Macondo.
Kepha GIS ezininginingi Kungaba nolaka olukhulu, mhlawumbe ngaphambi kukaJuni sizobona iManifold 9. Kokuncane esikufunde emafeni kamantshi akhululwa nguDimitry, ngibona ukuphikelela CUDA futhi uqhubeke ucindezela abantu kuma-64 bits, yilokho abakushoyo velocity. Kuyadabukisa, ngoba kudala kufanele bangene ezivumelwaneni nama-greats, okungenani ngamafomethi we-dwg kanye ne-dgn asele ezingeni lokuncenga avumelekile ekuxakaneni kwawo okuvela phakathi kweqiniso nokunambitheka okungalungile.
Uma kukhona okumele kulindeleke kusuka kwi-Manifold ukuthi labo bangani bayabhema of the green, Ngeke kusimangaze uma bengeza imisebenzi eminingi engasile kuthoyizi, elithuthukisa kancane kancane isikhundla salo ngokuqhathaniswa nelikhulu. Kepha ngombono wami, sizobona ubuhlanya obuningi ezingeni ledatha nokusebenzisana, okuncane ezingeni lokwakhiwa nokuhlelwa kwevektha.
Umthombo ovulekile: Ufuna ukusimama. Akekho owathi lokhu akuyona eyokuhweba, imigomo mahhala futhi hhayi mahhala zanele ukuhlukanisa izingxenye.
Ukuqonda okujulile, kodwa ngombono wami, gvSIG nge version yayo 1.9 enzile uzoqhubeka nokuxazulula izimbungulu ezincane futhi enze izivumelwano ezipha ukusimama nokuma. Leli gama libukeka liyinkimbinkimbi, uma sinikeza imakrofoni kososayensi bezenhlalo, ngiyithanda kangcono indlela izazi zezolimo namahlathi eziyichaza ngayo:
Ezinye izihlahla azibandakanyi ihlathi, ngoba kufanele kube nemvelo enhle futhi inani elithile libhekwe njengezinzile.
Uma kwenzeka gvSIGKuzofanele ilandele leyo mibimbi ebisungule ngaseYurophu, maphakathi neSpain naseLatin America. Isizathu esiyisisekelo: ngubani ozonikeza ukuqhutshwa kwezinguquko ezinjenge-Windows 7 uma ku- Generalitat akayena nentshisekelo yokuqhubeka nayo Don Bill Gates, noma ama-flavour ayinkulungwane asezinqolobaneni ze-Linux. Futhi ngalokhu, udinga ukudala amanethiwekhi wokusimamisa umongo we-hybrid: izifundiswa, umkhakha ozimele, umkhakha womphakathi, ezingakulungela lapho sibona izinto kusuka ku-gvSIG 2.0.
Icala leqhaza elidlalwa yizinhlelo ezifana ne-OSGeo, Fig y Vula Consortium ye-GIS, kulindeleke ukuthi baqhubeke behamba phansi epulazini, ngokumelwa okukhulu komphakathi waseSpanishi nokulinganisela phakathi kwe mahhala futhi hhayi mahhala.
Abanye abakhululekile, cishe sinalo nguqulo entsha I-GIS ephathekayo, evuselela amapulatifomu azinzile futhi ahlanganise ama-screwdrivers ambalwa. Ngokubona kwami, sizobona okusha okuncane ngezinye esezivele zafinyelela ekuvuthweni, njenge GIS Quantum, Grass kanye ne-Udig; banengcindezi eyengeziwe yokwakha ukusimama kunokuba benze izinto ezintsha.
Angizikhiphi izindaba ezithokozisayo, okwenzekayo ukuthi njengezinhlelo ezincane (hhayi mahhala), ikhono labo lokwenza umsindo alinomthelela omncane kwimvelo yaseSpain. Okungenani, hhayi njenge-gvSIG, yona enesipikili esincane ngasinye thatha i-jolota ukuze uhambe, isu eliye lasebenza ngaphezulu kokuhlelwa kunesayizi sebakaki; futhi lokho kwakha ukusimama.
Uma kwakungimi, ngingakhipha ukukhetha okunye enginakho ngeSofthiwe hhayi mahhala, kwenzekani yilokho i-gvSIG kufanele icabange ngabasebenzisi Babafelokazi, (i-95%) lapho iziqephu ze-90,000 zihlushwa ukuhamba kancane kwemvelo ye-Java nokuthi izinqubomgomo ezahlukene zibavimbela ekuthutheleleni ku-Linux kanye hlukana.
Futhi okuningi okuningi umthombo ovulekile kuyoba nxazonke okwenzekayo nge-MySQL, manje I-Oracle inayo ukubhema okuphelele phakathi komunwe wesibili nowesithathu (kanye nesithathu). Ngokwengxenye kuhle, ngoba abaningi balindele izindaba ezingasile ezizovela kuPostgreSQL nakuPostGIS.
Amanye amakhambi: Lo ezingalindelekile I-Google Earth, ngombono wami cishe eminyakeni emithathu ingaba namandla amaningi wokwakhiwa nokuhlaziywa ku chofoza izinsiza ze-kml kanye ne-OGC. Kungenzeka ukuthi iqiniso vula ngaphakathi kuya ku isongo njengezinga elijwayelekile ku-Consortium ukukhiqiza izithelo ezenzakalweni zabangaphandle, lokhu kungenza i-Google igxile ekunikezeni inani elifanelwe (kubo), isiteji sokuhamba i-gorilopolic. (Okukugcina kuqondwa kumongo wezindawo ze-UTM 15 kanye ne-16 kanye nomphumela wale khofikazikazikazi
Yini enye engingayisho, lena yindawo yomkhiqizo ohlala eduze lapha. Cadcorp, ImephuInfo futhi i-SuperGIS ivela kwenye indawo, futhi lokhu kugcina indawo emapulazini asepulazini lendawo.
Thumela Previous«Langaphambilini I-Bentley Cadasatre: umehluko ne-Bentley Imephu neMephu Yamandla
Post Next I-Geofumed: imigqa engu-48 emnyama nomhlopheOkulandelayo »